Xaaladda Baladweyne oo Cakiran | KEYDMEDIA ONLINE
3 August 2021 Boqolaal askari oo Al-Shabaab looga dilay Mudug
Xaaladda Baladweyne oo Cakiran
Xaaladda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa Cakiran kaddib bannaanbaxyo sababay israsaaseyn iyo weliba dagaal fool-ka-fool ah oo ay dad ku dhinteen.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan islamarkaana ka tirsan deegaanka Hirshabeelle ayaa waxaa maanta ka billowday halkaasi bannaanbaxyo lagu diiddan yahay imaashiyaha Madaxweynaha dhawaan lagu soo doortay magaalada Jowhar ee Cali Guudlaawe oo sida la qorsheenayo ku wajahan magaaladaasi, waxaana bannaanbaxyaashu ay jareen waddooyinka waa weyn ee magaalada soo gala iyagoo diiddan imaashiyaha Cali Guudlaawe ee Baladweyne.
Sidoo kale qeybo ka mida magaalada Baladweyne waxaa ka billowday dagaal u dhaxeeya kooxo hubeysan oo diiddan imaashiyaha madaxda Hirshabeelle iyo ciidamada Dowladda ee ku sugan Baladweyne, waxaana halkaasi ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinacyadii ku diriray magaalada, iyadoo la rumeysan yahay in dagaalkani uu salka ku haayo khilaafka reer Baladweyne kala dhaxeeya maamulka cusub ee dhawaan lagu soo dhoodhoobay magaalada Jowhar.
Waxaa mar qura faraha ka baxay amnigii magaalada, waxaa yaraaday isku socodkii dadka ee magaalada gudaheeda, waxana la maqlayaa dhawaqa rasaas aan kala go' lahayn taasoo laga maqlayo magaalada Baladweyne.
Xalay Wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada DF Cabdullaahi Goodax Barr oo kasoo jeeda magaalada Baladweyne ayaa Wareysi uu siiyay Hiiraan Online uu aad u dhaliilay siyaasadda Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo Ugaaska reerka uu ka dhashay ee Ugaaska Xasan Ugaas Khaliif, isku soo baxa iyo dagaalka saakay ka dhashay waxaa la rumeysan yahay in uu qeyb ka yahay Goodax Barre oo lagu eedeenayo in uu ka qeyb qaataay kicinta bulshada reer Baladweyne.
Xaaladda magaalada Baladweyne ayaa Cakiran iyadoo laga cabsi qabo in ay sii socdaan isku soo baxyada ka dhanka ah madaxweyne Cali Guudlaawe.
Boqolaal askari oo Al-Shabaab looga dilay Mudug
Warar 3 August 2021 17:02
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegatay in ay Ciidamada XDS iyo Daraaawiishta Galmudug ay ku dhawaad 200 oo askari Al-Shabaab kaga dileen gobolka Mudug.
RW Rooble oo buriyey natiijada is doorashadii guddiyada SL
Warar 3 August 2021 14:39
Baarlamaanka Somaliland oo gudoon cusub doortay
Warar 3 August 2021 11:45